lundi, 07 octobre 2019 19:50
Solombavam-bahoaka: 2 amin’ny 151 no nanao fanambaram-pananana teny amin’ny HCC
Andriamanalinarivo Raymond Michel Jocelyn, Solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Antananarivo I, no nisantatra ny fametrahana ny tararatasy fanambaram-pananany teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC), tamin’ny 30 aogistra 2019.
Taoriany i Milavonjy Andriasy Philobert, ny Solombavam-bahoaka tsy miankina voafidy tao Ambovombe Androy. Ny 01 oktobra 2019 no tafapetraka teny Ambohidahy ny taratasy fanambaram-pananany.
Ny andininy faha-41 amin’ny Lalampanorenana no manery ny olom-boafidy hanao fanambaram-pananana mialoha ny handraisany ny asany.
lundi, 07 octobre 2019 14:29
CEG Ambariomihambana - Sambava: « Tokana no hany afaka BEPC noho foto-drafitr'asa », hoy ny Ray aman-dreny
Nataon'ireo Ray aman-dreny ho anton’ny faharatsian’ny voka-panadinana BEPC 2019 tao aminy, ny foto-drafitr'asa tsizarizary. Maniry izy ireo ny mba hitodihan'ny fitondram-panjakana amin’ny CEG Ambariomiambana Sambava amin'ity taom-pianarana ity, eo ny hanatsarana ny kalitaom-mpianarana, fa tsy tokony atao ambanin-javatra ihany ny trano izay mampanahy tsy hahatohitra ny oram-baratra.
Raha ny vokatra azo tamin'ity taona ity dia 01 tamin'ireo mpianatra miisa 19 niatrika ny BEPC no afa-panadinana. Nisy 05 kosa tsy tonga niatrika ny fanadinam-panjakana.
Fiarovana ny tontolo iainana: Nanatevina traikefa any amin’ny oniversiten’i Florida - Etazonia i Lalatiana Randriamiharisoa
Miasa amin'ny MNP (Madagascar National Parks) i Lalatiana Randriamiharisoa. Siantifika Malagasy izy, nahazo vatsim-pikarohana PEER Grant an’ny USAID, ary miasa any amin’ny oniversiten’i Florida any Etazonia i Lalatiana mandritra ny telo herinandro.
Mahazo fiofanana fanampiny izy ary miara-miasa amin'ny tarika amerikana hanao tombana ny torohay mikasika ny tetikasany: fomba fanofanana mpilatsaka an-tsitrapo eny anivon’ny fiarahamonina hanampy amin'ny fanangonana torohay momba ny karazana, hanatsarana ny fitantanana ireo faritra voaaro.
lundi, 07 octobre 2019 12:49
Emagnobo - Tolagnaro: Fisaram-panambadiana nivadika ho ady saritaka, olona 11 maty
Nandriaka ny rà taty Emagnobo, Distrikan’i Tolagnaro ny faran’ny herinandro teo. Nivadika ho fifamonoana faobe ny fisaraham-bady teo amin’ny lehilahy avy ao Emagnobo sy vehivavy avy any Esira-Amboasary Atsimo. Nampakatra vehivavy hafa ralehilahy nefa tsy mbola vita ny fombafomba amin’ny fisarahana tamin’ny vadiny teo aloha.
Niditra an-tsehatra ny Dina be, izay jado na malaso niova fo avy any Esira, nandamina. Omby maromaro no notakiana ho onitra ho sazin’ilay rangahy. Nanda ny hanavaka omby maro ny fianakavian-dralehilahy. Nandrahona ny handraoka ny omby teo an-tanàna ireo mpampihatra dina ka raikitra teo ny disadisa ady saritaka, niafara tamin’ny vono olona io. 11 no namoy ny ainy ka lasibatra ireo mpampihatra Dina.
Atahorana ny valifaty amin'izao.
Hotanterahina aty Moramanga ny 11, 12 ary 13 oktobra 2019 izao ny RIM (Rallye International de Madagascar) andiany faha-40.
Fiara miisa 34 no hifaninana amin’izany.
lundi, 07 octobre 2019 12:45
Bakalorea 2019: Mitsangana ny « Cellule de crise »
Nametraka ny “cellule de crise” ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, hanaraha-maso akaiky ny fizotry ny fitsarana ny fanadinana bakalorea.
Raha ny firafitry ny « Cellule de crise » dia hisy solontena 3 avy amin’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, miampy solontena 2 avy amin’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena, fampianarana ara-teknika, sy fiofanana arak’asa, miampy solontena 2 avy amin’ny Ministeran’ny fiarovam-pirenena misahana ny Zandarmaria, ary solontena 1 avy amin’ny Ministeran’ny filaminam-bahoaka.